नेप्से परिसूचक ० दशमलव ६२ प्रतिशत घट्यो – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
नेप्से परिसूचक ० दशमलव ६२ प्रतिशत घट्यो
२०७४, ६ पुष बिहीबार ०४:४२
काठमाडौं । बुधवार भएको कारोबारमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत घटेको छ । नेप्से तालिका हेर्दा उतारचढाब भएको देखिन्छ । १ हजार ४ सय ९३ दशमलव ७४ विन्दुबाट शुरू भएको नेप्से कारोबार भएको १५ मिनेटमा १ हजार ४ सय ८३ दशमलव १६ विन्दु तल झरेको थियो । सोही समयपछि उकालो लागेर १ घण्टाको अवधिमा १ हजार ४ सय ९२ दशमलव ५३ उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । तर अन्त्यसम्म सो विन्दुमा टिक्न नसकि ९ दशमलव २९ अङ्क घटेर १ हजार ४ सय ८४ दशमलव ४७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो ।
कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार भएको दिनको तुलनामा २९ दशमलव २० प्रतिशत घटेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत घटेर रू. १७ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत घटेर ३ सय १२ दशमलव ६८ अङ्क पुगेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५५ कम्पनीको ४ हजार ३ सय ९१ पटकको व्यापारमा ९ लाख ८३ हजार १ सय ८ कित्ता शेयरको रू. ४२ करोड ४३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेले लिएका उच्च कारोबार हुने १० कम्पनीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ८ सय ८६ मा रू. ४ करोड ९ लाख बराबरको सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएको छ । साथै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, एभरेष्ट बैङ्क, जनता बैङ्क नेपाल, बैङ्क अफ काठमाण्डु, गरिमा विकासको संस्थापक शेयर, चिलिमे हाइड्रोपावर, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रू. १ करोड २ लाखदेखि २ करोड ८६ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घटेको हो । सिन्धु विकास बैङ्कको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ६ दशमलव ७१ प्रतिशत बढेको छ । साथै, हिमालयन डिष्टिलरि लिमिटेडको शेयर मूल्य ७ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५५ कम्पनीमा ४३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ९२ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रल जोन अथवा ३८ दशमलव २९ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव ४६ रहेको छ । यसले बजार वुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।